Olee otú Iji Nledo On A Cell Phone Of Nwa m nwanyi ?
On: Oct 07Author: haIge: A gam akporo, Cell ekwentị Nledo, Cell ekwentị Ndepụta, Ọrụ nlekota oru, Wụnye Mobile Nledo, Nwata nu ay!, iPhone 5s Nledo Software, Ekwentị mkpanaaka nlekota oru, Mobile Nledo, Mobile Nledo Online, Nyochaa Internet-eji, Nne na Nna Control, Nledo Facebook ozi, Nledo N'ihi gam akporo, Nledo N'ihi iPhone, Nledo iMessage, inyocha Mobile ama, Nledo na Oku, Nledo na SMS, Nledo Skype, Nledo Viber, Nledo WhatsApp, Track GPS Location Ọ dịghị Comments
Olee otú Iji Nledo On A Cell Phone
Olee Otú M Pụrụ Nledo Na My nwa Cell Phone?
O dere, sị m ndị ọzọ ụbọchị arịọ otú ha pụrụ nyochaa ha nwa ekwentị. Ọ bụ afọ iri na ụma na ndị nne na nna nchegbu na ọ na e izipụ na inweta na-ekwesịghị ekwesị ozi na photos. M na-na-na-ozi ịntanetị site na nne na nna nchegbu banyere nwa ha ma ọ bụ nwa online ma ọ bụ na "ekwentị" ọdịmma. Ezie na ọtụtụ ga-akwadoghị ihe na nnoo n'iledo na ụmụ ha, na njedebe nke ụbọchị, dị ka nne na nna anyị mkpa ịchịkwa àgwà ha na ọ bụ ala ka anyị ka anyị hụ na ha na ọdịmma. Ọ bụrụ na a na-agụnye nlekota ha ekwentị oku ma ọ bụ ozi ederede, n'ezie, ihe ọ bụla na ha nwere ike ga-esi ruo online site ha igwe, mgbe ahụ ka ọ dị otú.
E nwere ọtụtụ nke ọrụ online nke ga-ekwe ka ị na nzuzo nyochaa a cell na ekwentị na-enye gị ime ohere nile ụdị nke data na ekwentị nwere ike ịnwe. N'ụzọ dị otú a ị nwere ike-na taabụ na ihe ụdị ozi ịntanetị ha eziga na-enweta online site ha igwe. Ị pụrụ ịhụ niile ozi ederede na SMS-ebute site ná na natara. Ị pụrụ ọbụna ịhụ foto na foto nke a na-akọrọ na internet sọọfụ akụkọ ihe mere eme.
Olee otú Iji Nledo On A Cell Phone – Uru Cell Monitoring Software
Ikekwe otu n'ime ndị kasị ike atụmatụ na ụdị software nwere bụ ikike na-ege ntị na ekwentị oku Live - dị ka ha na-eme. Mma nke isi software atụmatụ dị ka ozi ederede nlekota bụ na ị ga ọbụna-enwe ike ịhụ ha mgbe ha anọwo na-ehichapụ. Abamuru ọzọ nke software bụ na ọ na embeds onwe ya n'ahụ nke ukwuu na nzuzo n'ime smart ekwentị na ọ gaghị ekwe omume n'ihi na onye ọrụ agwa na ọ bụ n'ebe ahụ. Ya mere ọ bụrụ na ị na-a nchegbu mama ma ọ bụ papa, nchegbu na nwa gị nwaanyị na-eme omume na-ekwesịghị ekwesị ma ọ bụ na ha na-anata na-ekwesịghị ekwesị ozi, ikekwe site okenye nwa okoro ma ọ bụ a ị na-adịghị atụkwasị obi - nke a ụdị software ga-ekwe ka ị na-ahụ eziokwu n'azụ ihe na-aga na-enweghị ọbụna alerting ha ka ha eziokwu na i na a na-nlekota ha. E nwere ọbụna a nsuso atụmatụ ebe ị pụrụ ịhụ ebe ekwentị (na ya mere nwa gị nwaanyị) bụ mgbe niile na ekwentị na Switched on. Nakwa dị ka n'elu uru software-enye gị ohere ahụ na oku akụkọ ihe mere eme, oge na oku na-aga, ndị kpọrọ ndị na-ekwentị e ji mee na-akpọ. Ọ bụrụ na ndị nọmba dakọtara aha na ekwentị na ndetu kọntaktị, ị ga-enwe ike ịhụ aha ndị.
Olee ka ndị nledo na ozi ederede
Olee otú Iji Nledo On A Cell Phone – Wụnye Monitoring Software na nwa gị Cell Phone
E nwere nta catch, ọ bụ ezie na. Mkpa ka ị na-enwe ike ibudata na software na ekwentị na akpa ebe. Ugbu a, ọtụtụ ndị nne na nna ga-nanị ịgwa nwa ahụ na ha na-eme nke a, ọ ga-abụ a nsogbu. Ọfọn, ma eleghị anya ọ ga-, ma nke ahụ bụ gị ruuru. N'ọnọdụ ndị ọzọ na karịsịa na okenye na-eto eto nke a pụrụ ịbụ a trickier akpu na i nwere ike chọrọ iji wụnye software na nzuzo.
Ozugbo i soro ntụziaka ndị a na nlekota oru ngwa ga-agakwaghị enwe anya n'ebe ọ bụla na ekwentị otú nwa gị ga-enweghị echiche na i nwere ike-na taabụ na ya. Ọ dị mkpa iburu n'obi na mgbe ị na-jụrụ n'ihi na ikike isi, ị ga-enwetatụbeghị a tupu Mgbe ị debanyere na-akwụ ụgwọ maka software!
Ya mere,, ị kwụrụ maka software (Ọpụpụ m ego njikọ na peeji a!) ma na ị nwere gị ikike isi na ị rụnyere ngwa na iche na ekwentị. Ihe ugbu a?
Olee otú Iji Nledo On A Cell Phone – Iji Cell nnyocha Software nyochaa gị nwa Oku
Ọ bụrụ na ị rụrụ nile nzọụkwụ n'elu, ị nwere ike ugbu abanye n'ime ala onwe ebe na emeputa nyere n'ihi na ị online, na iji email na paswọọdụ nyere mgbe ị kwụrụ maka software. Ị ga-enwe ohere ozi nile nke na-agabiga ekwentị (ọbụna ihe niile nke Nwela ehichapụ n'otu ntabi!).
Gị ugbu a nwere ihe ngwọta na otú nyochaa gị nwa cell ekwentị na ọ ga-eri gị banyere $15.99 maka ngwa. Dị ka ọtụtụ reviews nke software show - nke a bụ ọma ruru ego maka udo nke uche ma ọ bụ mkpa iji nweta na-ala nke a ntụkwasị obi nke ma ọ bụ nsogbu na nwa gị nwaanyị. Ọ bụ ezie na $50 yiri nnukwu ịjụ ke akpa ilekiri, ị ga-ahụ na nke a software bụ eleghị anya ndị kasị tụkwasịrị obi online na gị mkpa izere ojoro saịtị na ga-enye software na ma na-adịghị arụ ọrụ ma ọ bụ ga-eri gị na ogwe aka na a ụkwụ na kwa ọnwa obere.
The ihe banyere nke a karịsịa software bụ na ahịa ọrụ bụ magburu onwe, na ịkwụ ụgwọ ụzọ nwere ọtụtụ na iche iche. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị na-achọta na software-adịghị arụ ọrụ kpọmkwem otú ị na-atụ anya na ya na-, ị nwere ike nweta ihe zuru ezu nkwụghachi na nweghị arụmụka. Nke a bụ ihe kasị tụkwasịrị obi ika online na atụmatụ na ị ga-esi dị otú ahụ a obere price bụ ịrịba. Nke a bụ n'ụzọ nkịtị dị ka inwe a tutuntu na-arụ ọrụ n'ihi na ị gburugburu elekere. Cheedị ọtụtụ ego na ga-ejedebe na-efu gị! Chọpụta eziokwu taa na-etinye gị uche na-eru, N'ikpeazụ.
Ị nwere ike Download: Olee otú Iji Nledo On A Cell Phone Of Nwa m nwanyi ?
Olee otú Iji Nledo On A Cell Phone, How to spy on a cell phone for free download, How to spy on a cell phone without having it, How to spy on a cell phone without installing software, How to spy on a iphone, Olee ka ndị nledo na ozi ederede, How to spy on your spouse